ထိပျတနျးခရီးသှားPortrait ဓာတျပုံဆရာဆယျဦး – Digital Photography Myanmar
August 11, 2016 Jedi Inspiration 2
ခရီးသွား Portrait ဓာတ်ပုံပညာဆိုတာ သာမန် Portrait ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒီဓာတ်ပုံပညာရဲ့ အနှစ်သာရက စိတ်ခံစားချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ချိန်ကိုက် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုးဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက် ဓာတ်ပုံဆရာအနေနဲ့ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ဖို့၊ ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိဖို့ နဲ့ အချိန်ကောင်းကို စောင့်ပြီး ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ထိပ်သီး ဓာတ်ပုံ ပညာရှင် ဆယ်ဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ခရီးသွား Portrait တွေကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Afghan Girl by Steve Mcurry
Steve McCurry (စတိဗ် မက်ခ်ခာရီ) ဆိုတာ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ပါ့ရ်ှဝါ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ‘Afghan girl’ ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သူပါ။ ဒီဓာတ်ပုံက National Geographic ရဲ့ လူသိအများဆုံးဓာတ်ပုံအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်။ သူရဲ့ အခြားသောဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ stevemccury.com မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Lee Jeffries (လီး ဂျက်ဖရီးစ်) ရဲ့ အိမ်ခြေမဲ့လူတွေအကြောင်း အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံတွေက ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ခြေမဲ့တွေရဲ့ မျက်ဝန်းကတဆင့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို လီးက ဖော်ပြပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ပါပဲ။ အခြားသောပုံတွေကို သူ့ရဲ့ 500px အကောင့် leejeffries.500px.com မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံကျော်က တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေအကြောင်းကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ခရီးသွား Portrait တွေကြောင့် Jimmy Nelsson (ဂျင်မီ နယ်လ်ဆင်) က နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတိုင်းမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်စီ ပြောပြနိုင်လောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် နယ်လ်ဆင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံစာအုပ်က ခုချိန်မှာ ပစ္စည်းစုဆောင်းသူတွေရဲ့ မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ သူ့ရဲ့အခြားဓာတ်ပုံတွေကို beforethey.com မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်၊ ရာဂျက်စသန် နဲ့ ကျူးဘား စတဲ့နေရာတွေကို Rehahn (ရေးဟန်း) က အခြေပြုပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ subject တွေရဲ့ အတွင်းစိတ် ကို ဖမ်းယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ရေးဟန်းက နာမည်ကြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Portrait ဓာတ်ပုံဆရာတွေထဲမှာ ရေးဟန်း ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ တစက်ကလေးတောင်မှ သံသယ ရှိဖို့မလိုပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံကောင်းတွေကို rehahnphotographer.com မှာ သွားရောက်လေ့လာလိုက်ပါ။
Borobudur festival takes palce in July in Indonesia and shows all the traditions of the area.
North Korea is the most militarised country in the world.According to the US State Department, North Korea has the 4th largest military in the world, at an estimated 1.2 million armed personnel for 23 millions north koreans.
Young Girl With Shiva Make Up, Maha Kumbh Mela, Allahabad, India
မြောက်ကိုရီးယားမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး Eroc Lafforgue (အဲရစ် လဖော်ဂ်) ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ လူတိုင်းမှာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဆီ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နမ်မီးဘီးယားက လူမျိုးစုတွေကနေ ကာဒ့်ဒစ်စတန်က ရာဇီဒစ်ဇ် လူမျိုးစုတွေအထိ ဖော်ပြထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ပုံပြင်တိုင်းမှာ တကယ့် စိတ်ခံစားချက်တွေ အများအပြားပါဝင်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အခြားဓာတ်ပုံတွေကို ericlafforgue.com မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖိုတိုရှော့ပ် မှော်ဆရာ သို့မဟုတ် Manny Librodo (မန်နီ လီဘရိုဒို) ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဆိုတာထက် အနုပညာ ဖန်တီးမှုဆိုရင် ပိုပြီး မှန်ပါလိမ့်မယ်။ http://www.pbase.com/manny_librodo မှာ သူ့ရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Lisa Kristine (လီစာ ခရစ်စတင်းန်) ဆိုတာ လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်စုရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့ ဖော်ပြခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖော်ပြခြင်းမှာ သူမက အရေးပါခဲ့ပါတယ်။ lisakristine.com မှာ သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရှိပါတယ်။
ဘရာဇီးလ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ ကင်ညာ နိုင်ငံတွေမှာ အသက်ရှုမှားလောက်အောင် ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ David Lazar (ဒေးဗစ် လာဇာ) က ဘဝရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အခိုက်အတန့်တွေကို အမြဲတမ်း လိုက်လံ ရှာဖွေနေသူတစ်ဦးပါ။ davidlazarphoto.com မှာ သူ့ရဲ့ ပုံကောင်းတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ အကြည့်တစ်ခုနဲ့တင် Portrait ဓာတ်ပုံတွေကို ပြည့်စုံစေပါတယ်။ Joel Santos (ဂျိုရယ် ဆန်းတော့စ်)က သူ့ရဲ့ subject တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ joelsantos.net မှာ ပုံကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
တီဘတ် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝတွေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက အသွင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သူရဲ့ ဓာတ်ပုံပညာအပေါ် ဘယ်လောက် ကြိုးပမ်းထားလဲဆိုတာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ philborges.com မှာ သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရှိပါတယ်။
ကိုးကား။ ။Top 10 Most Famous Portrait Photographers In The World by Mousse photonatic
June 29, 2016 Zaw 1
သင့်လက်ထဲက ကင်မရာက အကောင်းဆုံးပါ သို့မဟုတ် #Blizzard2016 ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ၏ နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်း
June 18, 2016 Zaw 0
2 Comments on ထိပ်တန်းခရီးသွားPortraitဓာတ်ပုံဆရာဆယ်ဦး
Tin Shwe March 24, 2017 at 5:59 pm
Tin Shwe March 24, 2017 at 6:00 pm